In…dar view !!! | ကိုသင္ကာ . . . . Ko Thinker
← Unicode and … Unicode
December 30, 2008 · 5:25 am
In…dar view !!!
မေးတဲ့အခါ မေးမယ့်အကြောင်းအရာကိုလည်း လေ့လာဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ထားတဲ့၊ ဘလော့ဂ်လောကကလည်း စိတ်ဝင်စားမဘ့် အဓိက ပွိုင့် တော်တော်များများကို သူမမေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အင်တာဗျူးဘုရင် လယ်ရီကင်းရဲ့ အင်တာဗျူးကို အပတ်စဉ် အယ်လ်ဂျာဇီးယားမှာ ကျနော် စောင့်ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ဘိုးတော်က မှတ်စုတစ်ခုတော့ အမြဲကိုင်ထားတယ်။ တစ်ခါဗျူးရင် တော့ပစ်သုံးခုလောက် ကမ္ဘာ ပတ်ဗျူးတယ်။
နာဂစ်အလွန်တုန်းက ဂျာမန်သတင်းဌာနတစ်ခုက လှမ်းဗျူးတာလည်း သတိရတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောကြပေမယ့် အထစ်အငေါ့ မဖြစ်ဘူးပါ။ အခုကျမှ ဘယ်ရောက်လို့ ဘာဆက်မေးမှန်းမသိ၊ မေးခွန်း ပြန်ကျော့တာကလည်း အတော် ဆိုးပါတယ်။ အရင် မီဒီယာတွေနဲ့မေးကြ မြန်းကြတုန်းက ဒီလို မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ (မမေးမြန်းခင် မေးလိုသူရဲ့ လိုချင်တဲ့ အကွက်နဲ့ ဖြေလိုသူရဲ့ ရပ်တည်မှုနေရာဟာ အရေးတကြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သင်ခန်းစာ ရလိုက်တယ်။)
လာကြည့်သူ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ သိရင် လူတွေ သိမသိ အကဲဖြတ်လို့ရပြီလို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ မသိတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ဆက်မေးဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ဘလော်ဂါနဲ့ ဘလောဂ့်ဖတ်သူ အကြမ်းဖျဉ်း ဦးရေကို မှန်းလို့ရပြီပဲ။ မြန်မာပြည် လူဦးရေ သန်းငါးဆယ်ကျော်လုံးတော့ ဘလော့ဂ်အကယ်ဒမီကို စိတ်မဝင်စားတာ သေချာပါတယ်။
အင်တာမဗျူးခင်မှာ ကျုပ်ကလည်း အချင်းချင်းခြေမြင်နိုင်တဲ့ ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောမထားခဲ့ပါဘူး။ ပြောဖို့လည်း လိုတယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အပေါက်ဝက ဂိတ်စောင့်လောက်သိတာပါလို့ စကားခင်းခဲ့တာကို အထဲရုံးက ဥက္ကဌတာဝန်တွေမေးတော့ အိုးနင်းခွက်နင်း၊ မဖြေချင်တာတွေ တုံးတိတိပြော၊ မေးသင့်တာတွေကျတော့ မမေး၊ ဘယ်ရှုထောင့်က ချဉ်းကပ်မှန်းမသိ လုံးချာလိုက်ပြီးသကာလ “အင်း…ဒါဗျူး”ဆိုပြီး ကိုယ်စီ ပုံဖော်ကြတဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်းရုပ်လုံးတစ်ခု ဖြစ်ရတော့တာပါပဲ။
Tagged as Experience, Media
0 responses to “In…dar view !!!”
wanna interview you.
တယ်ဆိုးတဲ့ အင်တာဗျူဝါ ပါလားဗျာ. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မှတ်မှတ်သားသားတော့ ရှိသွားပြီပေါ့. 🙂